प्रहरी अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुल्ला - प्रहरी अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुल्ला
प्रहरी अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुल्ला
नेपालबहस संवाददाता २०७४, २७ कार्तिक 302 Views
२७ कात्तिक, काठमाडौं । महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरी अस्पताल सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला गरिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले हिजो सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन् । उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा ब्याख्या गरिएकाले प्रहरीले मनन् गरी आम नागरिकका लागि पनि प्रहरी अस्पताल खुल्ला गरिएको बताए ।
सर्वसाधारणलाई सेवा दिन थालेपछि नेपाल प्रहरीका बहालवाला कर्मचारी, शहीद परिवार, पूर्वप्रहरी उनीहरुका आफन्त, आश्रित परिवारले पाउँदै आएको सेवामा कुनै असर पर्न नदिन अस्पतालले ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।
अस्पतालका निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा दिनेशचन्द्र पोखरेलले दिउँसो एक देखि ३ बजेसम्म ओपिडी सेवा सर्वसाधारणका लागि दिइने बताए । उनले अन्य सरकारी अस्पतालले दिँदै आएको शुल्ककै वरपर रहेर प्याथोलोजी, ल्याब, शल्यक्रियालगायत सबै सेवा प्रदान गरिने जानकारी दिए ।
प्रहरी अस्पतालमा उपचारका लागि जाने सर्वसाधारण बिरामीले रु ५० को पर्चा काट्नुपर्छ । औषधि, भर्ना हुने बिरामीका लागि खाना कसरी के गर्ने भन्ने विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरी चाँडै टुंगो लगाउने बताइएको छ ।
तत्कालका लागि आठ शैय्या आकस्मिक बिरामीका लागि, १०÷१० शैय्या महिला पु्रुषका लागि र ४ शैय्या शल्यक्रियापछि राख्नका लागि छुट्याइएको छ ।
विस २०७४ जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अस्पताल आम नागरिकका लागि खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि अस्पतालले बहालवाला, अवकाशप्राप्त प्रहरी, उनका परिवार र शहीर परिवारलाई मात्र सेवा दिँदै आएको थियो ।
उक्त अस्पतालमा दैनिक ५०० देखि हजार बिरामीले बहिरङग विभागमा उपचार गराउँदै आएका छन् भने १५० बिरामीले भर्ना भएर उपचार सेवा लिन्छन् । अस्पतालले भविष्यमा क्षेत्रीय प्रहरी अस्पतालहरुमा पनि सर्वसाधारणका लागि उपचार सेवा दिने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
२०७४, २७ कार्तिक
एसईई नतिजा : १।६–२।० ल्याउने धेरै
एसईईको नतिजा गतवर्षको भन्दा ६.४६ प्रतिशतले खस्कियो
शिक्षाविद् भन्छन्,‘ग्रेडिङ प्रणाली उल्टो गतिमा’
५ राजमार्ग पहिरोको उच्च जोखिममा
अन्तिम मिनेटमा चुक्यो स्वीडेन, क्रुजको गोलले ठूलो हारबाट जोगियो जर्मनी !
पहिलो हाफमा स्वीडेनको अग्रता, जर्मनी विश्वकपबाटै बाहिरिने खतरामा !
रुस विश्वकपको ‘गोल्डेन बुट’ दौडमा रोनाल्डोसँग लुकाकुको बराबरी !